နှစ်သစ်မှာ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေမှမလုပ်ရင် ယောင်းဝိတ်ကျဖို့လမ်းမမြင်တော့ပါဘူး… -
နှစ်သစ်မှာ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေမှမလုပ်ရင် ယောင်းဝိတ်ကျဖို့လမ်းမမြင်တော့ပါဘူး…
Posted on January 1, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
အိမ်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပဲထည့်ပေးထားတာ အကြောင်းတွေသိနေလို့ 😐😐😐
၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာကတည်းက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့၊ ၁၀ မိနစ်လောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေဖို့၊ အစားကိုချင့်ချိန်ပြီးစားဖို့ ပြောလာလိုက်တာ အခုနှစ်လည်းကုန်ပြီ။ ဘာမှလည်းဆက်မဖြစ်လာကြဘူး။ ကဲ ပြီးတဲ့နှစ်ကပြီးသွားပြီ ထားတော့။ အခုနှစ်သစ်မှာ ဘဝအသစ်နဲ့ အလန်းလွန်လွန်လန်းဖို့ နှစ်စကတည်းကကျင့်မယ်။ အခုမှမလုပ်ရင်တော့ ဒီဝိတ်ကျဖို့စိတ်ကူးကို ရေစက်သာချပေးလိုက်တော့နော်…
အိုခီ စမယ်။ ပထမဦးဆုံး Jumping Jack လို့ခေါ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို ၁၀ မိနစ် လုံးဝ (လုံးဝ) မခိုမကပ်ဘဲလုပ်မယ်။ Jumping Jack ဆိုတာ ခြေစု+လက်စု၊ ခြေကား+လက်ကား ခုန်ခုန်ပြီးလုပ်လို့ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ နှင်းပြောတာရှုပ်နေရင် ဒီ Video လေးထဲမှာ သွားကြည့်ကြည့်။ ဒီ Jumping Jack လေ့ကျင့်ခန်းက ၁၀ မိနစ်စာ သေချာထိထိရောက်ရောက် ဆော့ရင် ကယ်လိုရီ ၁၀၀ လောက်လောင်ကျွမ်းတာမို့ ဒါမှမလုပ်ရင် ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းကို သွားလုပ်မှာလဲပြော? သူ့ကို တစ်ခါဆော့ရင် ၁၀ စက္ကန့်စာကို ၁၀ မိနစ်လောက်ဆော့ပေးပါ။
ဒုတိယတစ်ခုကတော့ ကြိုးခုန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ ကြိုးပေါ်မြေပေါ်ချပြီး အပေါ်ကတက်ခုန်နေတာမျိုး မဟုတ်ဘူးနော်။ (သိနေတယ် ပရမ်းပတာတွေ လုပ်တော့မယ်ဆိုတာကို) ကြိုးကို လက်မောင်းနဲ့ လှည့်လှည့်ပြီး ခုန်တာကို ပြောတာပါ။ Jump Rope ကတော့ မိနစ် ၂၀ ခုန်ရုံနဲ့ ကယ်လိုရီ ၂၀၀ နီးပါးကျတဲ့အပြင် အိမ်ခန်းထဲမှာပဲလုပ်မလား၊ အိမ်ပြင်မှာပဲခုန်မလား ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတာမို့ ဟိုအကြောင်းပြ ဒီအကြောင်းပြနဲ့ ပြေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့။ တစ်ခုသတိထားရမှာက ခုန်တဲ့အခါမှာ ကြိုးလွတ်ရုံလောက်ပဲ ခုန်ရပါတယ်။ (အရမ်းမြင့်ရင် အမောဖောက်တတ်တယ်လေ။) တစ်ခါခုန်ရင် ၁၅ စက္ကန့်ကို ၄ ကျော့ကို မိနစ် ၂၀ စာဆော့ပါ။
Related Article >>> အက်ဒ်မင်မမရဲ့ ၄၅ မိနစ်စာ Cardio လေ့ကျင့်ခန်း (Gym သွားစရာလုံးဝ မလိုဘူးနော်!!!!!)
တတိယတစ်ခုကတော့ Jogging In Place လို့ခေါ်တဲ့ နေရာမှာပြေးခုန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ (ပြေးတာနဲ့ မတူဘူးနော်။ သူကနေရာမှာပဲ ခြေထောက်ကို မြှောက်မြှောက်ပြီး ပြေးတာ။) ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက အမြင်အရတော့ နည်းနည်းလေး လွယ်မယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ တစ်နေရာတည်းမှာပဲရပ်ပြီး မရွေ့အောင်ပြေးရတာမို့ နည်းနည်းတော့ အားထုတ်ရပါလိမ့်မယ်။ အမယ် ခက်လို့ကျော်မယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးမျှမယဉ်လေနှင့်၊ ၅ မိနစ်လောက် ထိထိရောက်ရောက်ပြေးရုံနဲ့ ကယ်လိုရီ ၁၀၀ နီးပါးလောင်ကျွမ်းတာဆိုတော့ ပြေးရတာတန်ပါတယ်နော်။ တစ်ခါပြေးရင် ၂၀ စက္ကန့် ၃ ကျော့ကို ၁၀ မိနစ်စာဆော့ပါ။
၄ ခုမြောက်လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ Squat Jump လို့ခေါ်တဲ့ အောက်ပိုင်းထိုင်ပြီး ခုန်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ (ဘာလို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေး ထည့်ပေးလဲဆိုတော့ Cardio လေ့ကျင့်ခန်းဆော့တဲ့အခါ အသားပျော့တတ်တဲ့ သဘာဝရှိတာမို့ တင်ပါးတွေရွဲသွားမှာစိုးလို့ပါ။) ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးက ခါတိုင်းနှင်းတို့ တင်ပါးထိုင်သလိုပဲ ထိုင်ပြီးပြန်ခုန်ထရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ တင်ပါးထိုင်လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့် တင်ပါးနဲ့ပေါင်တောက်လျှောက်ကို တင်းရင်းစေပြီး ပြန်ခုန်ထတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်အလေးချိန်ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ သူကလည်း ၁၀ မိနစ်စာထိထိရောက်ရောက်ဆော့ပေးရုံနဲ့ ကယ်လိုရီ ၁၀၀ နီးပါးလောင်ကျွမ်းစေတာမို့ ပင်ပန်းလည်း တန်တယ်ဆိုတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားပါပဲ။ တစ်ခါခုန်ရင် စက္ကန့် ၃၀ ကို ၁၀ မိနစ်အပြည့် ထိထိရောက်ရောက်ခုန်ပါ။
ဘယ်နှခုလဲ? ၄ ခုနော်။ မိနစ် ၅၀ စာပဲသေချာတွက်ပြီး ထုတ်ပေးထားတာတောင် မောတယ်၊ ပန်းတယ် အသက်ထွက်တော့မယ်နဲ့ အမျိုးစုံကြိုးခုန်ပြီး အကြောင်းပြချက်ပေါင်းစုံပေးနေရင်တော့ ဝိတ်ချချင်စိတ်ကို ဘုရားသာလှူလိုက်ပါတော့ယောင်းရေ။ ပြီးတော့ မိနစ် ၅၀ ကို တစ်ရက်လောက်ပဲဆော့ပြီး ချက်ချင်း ၁၀ ပေါင်လောက် ဝုန်းကနဲကျမယ်လို့ မျှော်လင့်နေရင်တော့ ဆုကိုမှအကြီးကြီးတောင်းလို့ပဲ အားပေးစကားပြောလိုက်မယ်၊ ဟုတ်တယ်။ အာ့ သေချာလုပ်နော်။ နှင်းမေမေက စိတ်မဆိုးပေမဲ့ နှင်းကလေးကတော့ စကားနားမထောင်တဲ့ ယောင်းယောင်းတွေကို စိတ်ဆိုးနေပါပြီလို့ ><
ဒါနဲ့ ဟက်ပီး နျူးရီးယားပါယောင်းယောင်းလေး။
References : verywellfit, stylecraze
အိမျမှာ လှယျလှယျကူကူလုပျလို့ရမယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလေးတှပေဲထညျ့ပေးထားတာ အကွောငျးတှသေိနလေို့ 😐😐😐
၂၀၁၇ ဒီဇငျဘာကတညျးက လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဖို့၊ ၁၀ မိနဈလောကျလေးပဲဖွဈဖွဈ လှုပျလှုပျရှားရှားနဖေို့၊ အစားကိုခငျြ့ခြိနျပွီးစားဖို့ ပွောလာလိုကျတာ အခုနှဈလညျးကုနျပွီ။ ဘာမှလညျးဆကျမဖွဈလာကွဘူး။ ကဲ ပွီးတဲ့နှဈကပွီးသှားပွီ ထားတော့။ အခုနှဈသဈမှာ ဘဝအသဈနဲ့ အလနျးလှနျလှနျလနျးဖို့ နှဈစကတညျးကကငျြ့မယျ။ အခုမှမလုပျရငျတော့ ဒီဝိတျကဖြို့စိတျကူးကို ရစေကျသာခပြေးလိုကျတော့နျော…
အိုခီ စမယျ။ ပထမဦးဆုံး Jumping Jack လို့ချေါတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးကို ၁၀ မိနဈ လုံးဝ (လုံးဝ) မခိုမကပျဘဲလုပျမယျ။ Jumping Jack ဆိုတာ ခွစေု+လကျစု၊ ခွကေား+လကျကား ခုနျခုနျပွီးလုပျလို့ရတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးပါ။ နှငျးပွောတာရှုပျနရေငျ ဒီ Video လေးထဲမှာ သှားကွညျ့ကွညျ့။ ဒီ Jumping Jack လကေ့ငျြ့ခနျးက ၁၀ မိနဈစာ သခြောထိထိရောကျရောကျ ဆော့ရငျ ကယျလိုရီ ၁၀၀ လောကျလောငျကြှမျးတာမို့ ဒါမှမလုပျရငျ ဘယျလကေ့ငျြ့ခနျးကို သှားလုပျမှာလဲပွော? သူ့ကို တဈခါဆော့ရငျ ၁၀ စက်ကနျ့စာကို ၁၀ မိနဈလောကျဆော့ပေးပါ။
ဒုတိယတဈခုကတော့ ကွိုးခုနျတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးပါ။ ကွိုးပျေါမွပေျေါခပြွီး အပျေါကတကျခုနျနတောမြိုး မဟုတျဘူးနျော။ (သိနတေယျ ပရမျးပတာတှေ လုပျတော့မယျဆိုတာကို) ကွိုးကို လကျမောငျးနဲ့ လှညျ့လှညျ့ပွီး ခုနျတာကို ပွောတာပါ။ Jump Rope ကတော့ မိနဈ ၂၀ ခုနျရုံနဲ့ ကယျလိုရီ ၂၀၀ နီးပါးကတြဲ့အပွငျ အိမျခနျးထဲမှာပဲလုပျမလား၊ အိမျပွငျမှာပဲခုနျမလား ကိုယျ့စိတျကွိုကျလုပျလို့ရတာမို့ ဟိုအကွောငျးပွ ဒီအကွောငျးပွနဲ့ ပွေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့။ တဈခုသတိထားရမှာက ခုနျတဲ့အခါမှာ ကွိုးလှတျရုံလောကျပဲ ခုနျရပါတယျ။ (အရမျးမွငျ့ရငျ အမောဖောကျတတျတယျလေ။) တဈခါခုနျရငျ ၁၅ စက်ကနျ့ကို ၄ ကြော့ကို မိနဈ ၂၀ စာဆော့ပါ။
Related Article >>> အကျဒျမငျမမရဲ့ ၄၅ မိနဈစာ Cardio လကေ့ငျြ့ခနျး (Gym သှားစရာလုံးဝ မလိုဘူးနျော!!!!!)
တတိယတဈခုကတော့ Jogging In Place လို့ချေါတဲ့ နရောမှာပွေးခုနျတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးပါ။ (ပွေးတာနဲ့ မတူဘူးနျော။ သူကနရောမှာပဲ ခွထေောကျကို မွှောကျမွှောကျပွီး ပွေးတာ။) ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးက အမွငျအရတော့ နညျးနညျးလေး လှယျမယျလို့ထငျရပမေဲ့ တကယျတမျးကတြော့ တဈနရောတညျးမှာပဲရပျပွီး မရှအေ့ောငျပွေးရတာမို့ နညျးနညျးတော့ အားထုတျရပါလိမျ့မယျ။ အမယျ ခကျလို့ကြျောမယျဆိုပွီး စိတျကူးမြှမယဉျလနှေငျ့၊ ၅ မိနဈလောကျ ထိထိရောကျရောကျပွေးရုံနဲ့ ကယျလိုရီ ၁၀၀ နီးပါးလောငျကြှမျးတာဆိုတော့ ပွေးရတာတနျပါတယျနျော။ တဈခါပွေးရငျ ၂၀ စက်ကနျ့ ၃ ကြော့ကို ၁၀ မိနဈစာဆော့ပါ။
၄ ခုမွောကျလကေ့ငျြ့ခနျးကတော့ Squat Jump လို့ချေါတဲ့ အောကျပိုငျးထိုငျပွီး ခုနျရတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးပါ။ (ဘာလို့ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးလေး ထညျ့ပေးလဲဆိုတော့ Cardio လကေ့ငျြ့ခနျးဆော့တဲ့အခါ အသားပြော့တတျတဲ့ သဘာဝရှိတာမို့ တငျပါးတှရှေဲသှားမှာစိုးလို့ပါ။) ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးလေးက ခါတိုငျးနှငျးတို့ တငျပါးထိုငျသလိုပဲ ထိုငျပွီးပွနျခုနျထရတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးပါ။ တငျပါးထိုငျလကေ့ငျြ့ခနျးကွောငျ့ တငျပါးနဲ့ပေါငျတောကျလြှောကျကို တငျးရငျးစပွေီး ပွနျခုနျထတဲ့အခါမှာလညျး ကိုယျအလေးခြိနျကို ကဆြငျးစပေါတယျ။ သူကလညျး ၁၀ မိနဈစာထိထိရောကျရောကျဆော့ပေးရုံနဲ့ ကယျလိုရီ ၁၀၀ နီးပါးလောငျကြှမျးစတောမို့ ပငျပနျးလညျး တနျတယျဆိုတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးအမြိုးအစားပါပဲ။ တဈခါခုနျရငျ စက်ကနျ့ ၃၀ ကို ၁၀ မိနဈအပွညျ့ ထိထိရောကျရောကျခုနျပါ။
ဘယျနှခုလဲ? ၄ ခုနျော။ မိနဈ ၅၀ စာပဲသခြောတှကျပွီး ထုတျပေးထားတာတောငျ မောတယျ၊ ပနျးတယျ အသကျထှကျတော့မယျနဲ့ အမြိုးစုံကွိုးခုနျပွီး အကွောငျးပွခကျြပေါငျးစုံပေးနရေငျတော့ ဝိတျခခြငျြစိတျကို ဘုရားသာလှူလိုကျပါတော့ယောငျးရေ။ ပွီးတော့ မိနဈ ၅၀ ကို တဈရကျလောကျပဲဆော့ပွီး ခကျြခငျြး ၁၀ ပေါငျလောကျ ဝုနျးကနဲကမြယျလို့ မြှျောလငျ့နရေငျတော့ ဆုကိုမှအကွီးကွီးတောငျးလို့ပဲ အားပေးစကားပွောလိုကျမယျ၊ ဟုတျတယျ။ အာ့ သခြောလုပျနျော။ နှငျးမမေကေ စိတျမဆိုးပမေဲ့ နှငျးကလေးကတော့ စကားနားမထောငျတဲ့ ယောငျးယောငျးတှကေို စိတျဆိုးနပေါပွီလို့ ><
ဒါနဲ့ ဟကျပီး နြူးရီးယားပါယောငျးယောငျးလေး။
Tagged 2019, cardio, Loss, new, resolution, Weight, workout, year
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်စိတ် တဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာစေမယ့် နည်း (၇)မျိုး
Posted on July 11, 2017 February 7, 2019 Author Christina Rosy
ဒီနည်းလမ်းတွေကို လိုက်လုပ်ပြီးရင် ပျင်းနေတော့မှာ မဟုတ်ဘူး.. ကျိန်းသေတယ် 😛
Career Fitness Health Motivation
ရုံးမှာအထိုင်များတဲ့ ယောင်းယောင်းတို့အတွက် အညောင်းလည်းပြေ အဆီလည်းကျ ရုံးခန်းထဲမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်နုိုင်တာလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော်
Gym သွားဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိဖြစ်နေလား? ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပါ။
Posted on April 26, 2019 Author Hnin Ei Oo
ဒါလေးဖတ်ပြီးရင်တော့ ချက်ချင်း Gym ကိုထသွားချင်စိတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာ ယုံ!!!